प्रदेश ५ का एम्बुलेन्समा ‘जिपिएस ट्याकिङ’ – Health Post Nepal
प्रदेश ५ का एम्बुलेन्समा ‘जिपिएस ट्याकिङ’
२०७७ साउन ८ गते १९:२२
प्रदेश ५ मा एम्बुलेन्सलाई जिपिएर ट्याकिङ सिस्टम राख्न सुरु गरिएको छ। एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले एम्बुलेन्स ट्याकिङ्‌को सुरुआद गरेका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रारम्भीक चरणमा ६० वटा वटा एम्वुलेन्समा जिपिएस डिभाइस जडान गरेको बताएको छ।
२४ सै घन्टा हेल्प लाइन सेवासहित प्रदेश सरकारले यो सेवालाई शुभारम्भ गरेको हो। सो अवसरमा मन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेशमा एम्वुलेन्स सञ्चालन सम्वन्धी निर्देशिका बनाएर सबै एम्बुलेन्समा जिपिएस डिभाईस अनिवार्य गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनले आकस्मिक विरामीलाई छिटो छरितो एम्वुलेन्स सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले जिपिएस सिस्टम जडान गरेको बताए।
मोवाइल भएका सेवा ग्राहीले एम्बुलेन्स नेपाल नामको एप डाउन्लोड गरी यसबारे जानकारी लिन सक्नेछन्। कुन एम्बुलेन्स कुन स्थानमा छ? कुन गतीमा चलिरहेको छ? भन्ने विषयमा जानकारी लिन र एम्बुलेन्स चालकको नम्बरमा कुराकानी गर्नसमेत सकिनेछ।
स्वाथ्य निर्देशनालय सञ्चालनमा ल्याएको फोन नम्बर ०७१४२०४९६ नम्बरमा फोन गरी इन्टरनेट पहुँचभन्दा बाहिर रहेका सेवा ग्राहीले आफू रहेको स्थान नजिकै कुन एम्बुलेन्स छ? भन्ने पनि जानकारी लिन सक्ने छन्।
प्रदेश ५ का स्वाथ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोद कुमार गिरीले उक्त सेवा केन्द्रका लागि २४ सै घण्टा कर्मचारीहरू सेवामा रहने बताए। उनले अहिले ६० वटा विभिन्न संस्था, सरकारी वा समुहका, नीजि एम्बुलेन्सहरुलाई जिपीएर ट्रयाकिङ गरिएको छ।